Seza & seza - China Gormeet Plastic
Tsofinareo koronosy ireo dingana be koa ampiasaina amin'ny seza famokarana, ny vokatra simika ireo fahamarinan-toerana, asidra, anti-voasakantsakan'ny, mangatsiaka & hafanana-mahatohitra, loko fahamarinan-toerana, mora ny hametraka sy mitantana. Misy karazany roa indrindra ny vokatra: zaza fiara seza, fampiasana iombonana seza. Baby fiara seza, Booster seza na ho fohy na lava fitsangatsanganana fitsangatsanganana, fiara seza zavatra tena ilaina ho an'ny ankizy, ankizy fiarovana seza noheverina ho iray amin'ireo fomba mahomby indrindra mba hisakanana ny ankizy tsy tampoka ratsy ...
Tsofinareo koronosy ireo dingana be koa ampiasaina amin'ny seza famokarana, ny vokatra simika ireo fahamarinan-toerana, asidra, anti-voasakantsakan'ny, mangatsiaka & hafanana-mahatohitra, loko fahamarinan-toerana, mora ny hametraka sy mitantana.
Misy karazany roa indrindra ny vokatra: zaza fiara seza, fampiasana iombonana seza.
Baby fiara seza, Booster seza
Na ny fitsangatsanganana fohy na lava fitsangatsanganana, fiara seza zavatra tena ilaina ho an'ny ankizy, ankizy fiarovana seza noheverina ho iray amin'ireo fomba mahomby indrindra mba hisakanana ny ankizy tsy tampoka ratra amin'ny lozam-pifamoivoizana.
Fiara izahay seza manolotra ho an'ny sokajin-taona rehetra, avy amin'ny zazakely vao teraka fiara seza ho Booster seza natao ho an'ny ankizy.
· Vita tamin'ny HDPE tany am-boalohany
Fanamiana hateviny sy ny matanjaka crashworthiness
Medium ny molekiolan'ny avo, miaraka amin'ny fiantraikany tsara ny fanoherana
Afaka mamokatra plastika endriny ihany, na namory ny faritra mba hanangana vokatra vita.
Common Mampiasa seza
Ampanjifaina seza izahay rafitra araka ny asa ilainareo, ka hahatonga azy ireo sembana Firenena Mikambana ho an'ny hafa mba hifanaraka anatin 'ny vokatra, ohatra, handrails, backrests sy ny sisa. Ny dingana afaka mifehy ny habe indrindra nandritra ny famokarana ao anatin'ny allowable tolerances, ary tsara foana amin'ny fanaraha-maso ny loko isan-karazany eo amin'ny batches.
Azo textured seza faritra & amin'ny endriny samy hafa, habe, loko & fahasarotan'ny.
Fitaovana anisan'izany fa tsy voafetra ho:
Asa anisan'izany fa tsy voafetra ho:
· Hamolavola orinasa mpamokatra entana
· Product hanatsara
· Fahatanterahany ny vondrona fanampiny asa
· Purchase ny subcomponents
· Fivoriambe sy ny fonosana
· Direct fandefasana amin'ny antoko fahatelo